Tsingerintaona faha-30 an'ny sarimihetsika Association "Nahazo sehatra lehibe aho!" | Fikambanana fampiroboroboana ny kolontsaina Ota Ward
Ny horonantsary "Nahazo ny sehatra lehibe aho!" Dia horonantsary 30 minitra izay niasan'ny Fikambanana fampiroboroboana ny kolontsaina Ota Ward ho fahatsiarovana ny faha-XNUMX taona niorenany.
Ilay mpilalao sarimihetsika mpitarika no nofidina tamin'ny alàlan'ny fanadinana iray tamin'ny alàlan'ny fandraisana mpiasa misokatra.
Mponina maro ao amin'ny paroasy no miseho ho extra, ary ny ankamaroan'izy ireo dia voatifitra tany Ota Ward.
Ny Screening dia karazan-tsarimihetsika vaovao azon'ny rehetra jerena maimaim-poana amin'ny alàlan'ny teatra sy amin'ny Internet.
Ny talen'ny Daisuke Miki, izay nahazo ny Grand Prix tamin'ny fetibe sarimihetsika marobe toa ny TAMA NEW WAVE ary mamokatra dokambarotra an-tserasera mihoatra ny 100 isan-taona.
Napetraka tao amin'ny tranom-bokim-panjakana, hatsikana mampientanentana miaraka amin'ny fihomehezana sy tomany izay tafintohina farany! !!
"Mangalatra sehatra! Ianao no mpilalao sarimihetsika mitarika!"
Hana Niwano, izay miasa tapa-potoana amin'ny fivarotana croquette mikasa ho lasa mpilalao sarimihetsika, dia notsidihin'olon-dehilahy iray, Kusaburo, izay tsy manana antenaina intsony.
Kusaburo, izay te-hahatanteraka ny nofinofiny hitarika sehatra teatra miaraka amin'ny vadiny efa nodimandry, dia manandrana mandray an'io sehatra io amin'ny fijerena ny takelaka ny "30th Anniversite Theatre Event" hitany tao amin'ny toerana ara-kolotsaina iray teo akaiky teo. Nosaintsainiko izany .
"Miracle Man" no lohatenin'ny sehatra. Sanganasa malaza mifototra amin'ny tantaran'i Helen Keller, izay nandresy ny kilema mavesatry ny "tsy hita", "tsy henoina" ary "tsy henoina", ary ny Profesora Sullivan, ilay "mpanao fahagagana" nanome ny fahazavany.
Hana, izay vao nahavita audition, sy Himeko, mpiasa tapa-potoana, dia nanapa-kevitra ny hiloka amin'ity fihaonana hafahafa ity.
Amin'izany fomba izany dia nanomboka lasa mpilalao sarimihetsika an-tsehatra ny fampiofanana manokana lehibe nataon'ny raibe.
Azo atao ve ny milentika an-tsehatra?Inona ny drafitry ny fakana razana raibe mando ny ainy? ??
Hana Niwano Tovovavy manonofinofy ny ho mpilalao sarimihetsika.Manan-talenta izy, fa rehefa mitaintain-doha dia mievina.
Teraka tao amin'ny Prefektioran'i Nagasaki tamin'ny taona 2000.Amin'ny maha mpilalao sarimihetsika azy, mavitrika amin'ny fahitalavitra, sarimihetsika ary dokambarotra izy. Horonantsary telo no hivoaka amin'ny 2017.Ny fisehoana lehibe dia ny CX "Exciting TV Sukatto Japan", dokam-barotra "Kirin", "SONY", "Ginza Colour", sns.
Himeko Yukitani Zokiolona amin'ny asan'ny tapa-potoana ataon'i Hana.Nikendry ny ho mpilalao sarimihetsika nandritra ny taona maro aho.
Teraka tao Ota Ward.Mpilalao sarimihetsika an'ny Production Jinrikisha.Nandray anjara tamin'ny sarimihetsika "Instant Swamp" (2005), "Turtles Are Surprisingly Fast" (2005), "Insects Not Listed in the Picture Book" (2007), "Achilles and the Turtles" (2008), "Nekonin" (2017 )) Ary maro hafa.
Saburo Ota (fantatra amin'ny anarana hoe dadabe)
Tany amin'ny tontolon'ny teatra izy taloha.Tapa-kevitra ny hametraka mpangalatra hanatanteraka ny nofinofy miaraka amin'ny vadiny efa nodimandry
Natao ho asan'ny fiainana rakugoman mpikarama iray izay nanolo ny kontin'olon-tokana sy rakugo klasika tamin'ny andro maoderina.Sangan'ny solontena: Sarimihetsika "Kids Return", "My Man", "Mt. Tsurugidake", TV "Sansu Detective Zero", "Naoki Hanzawa", sns.
Tamatsutsumi Tale iray mampiahiahy izay sady tsy vavy no tsy mikofoka vola.
Rehefa avy niasa toy ny rakugoka tamin'ny fomba Tachikawa dia niditra ho miaramila Takeshi.Ankoatry ny maha talenta sy mpilalao azy, izy no mpanoratra ny sarimihetsika "Suicide Bus" ary talen'ny mpanoratra sy mpanoratra ho an'ny sarimihetsika "Shichinin no Tomura". Nanoratra tantara tamin'ny 2012 izy.Izy no mpanoratra ny "Lehilahy Pavlov".
Tale: Daisuke Miki
Talen'ny solontenan'ny Movie Impact Co., Ltd.Navoaka tao amin'ny sinema ilay sangan'asa "Ranomasin'ny Cyclops", "Mine", "Yokogawa Suspense", sns.Mamokatra sary tsy voafatotry ny karazany izy, toa ny talen'ny sarimihetsika, ny talen'ny fandaharana amin'ny fahitalavitra ary ny talen'ny varotra.
Azo jerena ao amin'ny YouTube izao ilay sarimihetsika "Nahazo ny sehatra lehibe aho!"
Midira amin'ny YouTube avy amin'ny finday avo lenta, tablette na fitaovana hafa!
Mazava ho azy fa afaka mankafy azy maimaim-poana ianao.
YouTube "Nahazo ny sehatra lehibe aho! (Kinova 4K)" (96 minitra)
YouTube "Nahazo ny sehatra lehibe aho! (Trailer)"
Tsindrio eto raha hijery ilay tranonkala manokana amin'ilay sarimihetsika "Nahazo sehatra lehibe aho!" !!